Ka anyị bido mkparịta ụka a site n’ikwu na ihe akaebe m niile bụ akụkọ. Emebeghị m nyocha ọ bụla zuru ebe niile iji gosipụta ebum n'uche m; M na-aga n'ihu na ọtụtụ ndị mmadụ na-agba izu na m na ha anaghị eji usoro mgbasa ozi iji rụpụta nsonaazụ. Ha anaghị ata ahụhụ ma ọlị; ụlọ ọrụ ha na-eme ọfụma.
N'akụkụ nke ọzọ, enwere m ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ na-agwa m na ha anaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụghị nkwalite mgbasa ozi mmekọrịta n'ihi na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. “Gịnị ọzọ ka ị nwara?”, Ka m jụrụ. "Ọ dịghị ihe, anyị ekwesịghị.", Kwuru onye nwe ya. Na-adọrọ mmasị, yabụ otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nsonaazụ mgbasa ozi anaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụghị mgbasa ozi. Kedu ka ha si mara na ọ na-arụ ọrụ?!
Ebumnobi - ndị Fans gị na ndị na-eso ụzọ gị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eso gị n'ihi na ha na-enyocha ihe ha ga-azụ ma na-achọpụta ụlọ ọrụ gị? Echere m na nke ahụ bụ obere pasent nke ndị na-ege gị ntị niile… ma nwee anụrị na-anwa ịchọpụta ndị ha bụ.
Nweta - mgbanwe n'etiti netwọkụ mmekọrịta na nke gị nchịkọta juputara na oghere di iche, nke kasi uku n’ime ahia nile nke sitere na Tweet ma obu Facebook Update. Ọ gaghị ekwe omume; ọ siri ike.
Ndi oru - onye ọ bụla na-ere ahịa hụrụ ya n'anya ịdọpụta olulu ntụgharị gị ma gwa gị na njikọ aka dị mkpa n'etiti mmata na ntụgharị. Nsogbu a abụghị iwu; ọ bụ oghere dị n’etiti. Ndị ahịa jiri anya nke uche a dị jụụ ebe atụmanya gafere nzọụkwụ ikpeazụ na nke ọzọ. Eziokwu dị nnọọ iche. Ntughari di otutu kilomita site na ijiko na mgbasa ozi. O nwere ike iwe ọtụtụ afọ iji chụga ikike ụlọ nke ị nwere nwere ike mata maka ya. Nke ahụ bụ ọtụtụ mgbalị na obere nlọghachi na ntinye ego.
Anaghị m ekwu na mgbasa ozi mmadụ agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ, ana m arịba ama na m na-ahụkarị itinye ego na azụmaahịa na atụmatụ ndị ọzọ nwere nloghachi dị elu karịa na ntinye ego, na-achọ obere mbọ, ma dị mfe iji soro.
Anaghị m ahapụ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Achọpụtara m na mmata nke ọma, mmata, ikike, na ntụkwasị obi nwere ike ịkpalite nsonaazụ dị ukwuu. M na-agbasi mbọ ike na nsonaazụ mgbasa ozi na-abụkarị ikwubiga okwu ókè. Ọ bụrụ na onye ọ bụla agwa gị dị iche iche, lelee azụmahịa ebe ahụ ma nyochaa otu esi akwụ ha.